Accueil > Gazetin'ny nosy > Médecin inspecteur: Mibaiko ben’ny tanàna handroaka mpanao gazety
Médecin inspecteur: Mibaiko ben’ny tanàna handroaka mpanao gazety
Mbola maro tokoa ny tany lavitr’Andriana eto Madagasikara ka manao izay danin’ny kibony ny “tompomenakely” isany any ambanivolo any. Isan’ny manampatra ny fahefana eo aminy, ohatra ity “Médecin Inspecteur” any Amboasary Atsimo ity.
Raha ny akom-baovao avy any an-toerana dia vao roa volana latsaka kely izao no nahazo dokotera mpitsabo (Médecin diplomé d’Etat) ny ao amin’ny kaominin’i Tsivory any Amboasary Atsimo. Efa an-taonany maro no nangatahan’ny mponina ny mba hahazoana dokotera mpitsabo toa izany fa izao vao nody ventiny ny rano nantsakaina. Amin’izao fotoana dia ankasitrahan’ny mponina sy ireo tompon’andraikitra ara-panjakana isan-tokony ao an-toerana sy ireo mpiandraikitra kaomina manodidina ny fandraisana andraikitr’ity dokotera vaovao ity, saingy tsy zakan’Ingahy “Médecin Inspecteur” satria tsy mitovy fiaviana ara-poko aminy.
Manjaka ny kinamanamana
Raha ankasitrahan’ny mponina ny fandraisana andraikitr’ity dokotera mpitsabo vaovao ity dia mampihivingivin-doha ny maro kosa ny afitsoky ny tompon’andraikitra voalohan’ny raharaham-pitsaboana na ny “Médecin inspecteur” any Amboasary Atsimo, izay miahy an’ity kaominin’i Tsivory ity sy ny manodidina. Raha tsy fianakaviany, ohatra, na tsy mpiray fiaviana (???) amin’Ingahy “Médecin Inspecteur” Ranto, hoy ny vokatry ny fanadihadiana natao tany, dia ambany rika, izany hoe tsy mahazo avara-patana, ary ilàny vaniny hatrany.
Raha ny tarehi-marika nivoitra tamin’ny fanadihadiana nataon’ny mpanao gazety zokiolona, Rabena David nanao fitsidiham-paritra tany ity, dia ny telo amin’ireo lehiben’ny tobim-pitsaboana (chef Csb) miisa fito amby roapolo (3/27) ao anatin’ny distrikan’
Amboasary Atsimo, no hany tsy mpiray fiaviana amin’Ingahy “Médecin Inspecteur”. Tsy iza ireo fa ny ao amin’ny “Csb” Antranomaro, ny ao Maromby ary ny dokotera mpitsabo vaovao ao Tsivory.
Nitranga ny jadona
Somary nihiboka tany ambadika tany avokoa ny fihetsika namoehitra avy amin’Ingahy “Médecin-Inspecteur” hatrizay fa nandritra ny famindram-pahefana teo amin’ny mpiandraikitra ny “Csb” ao Tsivory tamin’ity dokotera mpitsabo vaovao no nisehoan’ny olana. Nisy fahabangana mantsy ny vidim-panafody tao amin’ity tobim-pitsaboana “Csb” ao Tsivory ity. Noteren’Ingahy “Médecin Inspecteur” ity dokotera vaovao hanentsina ny lavaka. Fianakaviany mantsy ilay mpitsabo mpanampy (paramed) izay nisahana ity “Csb” teo aloha ity. Tsy nanaiky an’izay baiko izay anefa ity dokotera mpitsabo vaovao, ka teraka teo ny fifanolanana.
Avy hatrany dia nesorin’Ingahy “Médecin Inspecteur” tamin’ity dokotera mpitsabo vaovao ny fitaovana rehetra sy ny “tablette” ka nomena ny “mpila anditra” iray, dia ny mpampivelona Maho Razanamalala Brigitte izany, ny fahefana rehetra. Dia karazan’ny ho saribakoly fotsiny izany sisa ilay dokotera mpitsabo vaovao. Ny akon’izany rehetra izany, voalohany indrindra, dia tsy avela manatrika revio (révues) sy fiofanana ity dokotera mpitsabo ity fa “Rasazy” hatrany no mandeha. Dia miainga avy amin-dRasazy avokoa ny toromarika rehetra, indrindra fa ny lafiny ara-bola amin’ny fanaovam-bakisiny.
Ho an’ny rehetra dia tsy mbola nisy mihitsy teto Madagasikara izany hoe “mpampivelona (Rasazy) no ndeha hibaiko dokotera mpitsabo” manana mari-pahaizana ambony (diplomé d’Etat).
Ianjadian’adin-tsaina ny hafa
Henjana ary mafy ny vesatra ara-tsaina zakain’ity dokotera mpitsabo vaovao any Tsivory ity noho izany rehetra izany. Isan’izany ny fanerena azy hanao taratasy fitsipahana ny tatitra tonga tany amin’ny tompon’andraikitra ambony momba ny fahasalamana (Direction régionale de la santé) any Taolagnaro, raha nandalo tany Amboasary Atsimo ity tompon’andraikitra ity, andro vitsivitsy lasa izay.
Mihatra aminy koa ny fandrahonana sy ny ho famotehana ny ho aviny amin’izao fotoana. Hany ka matahotra mafy ny ainy izy, hoy ny mpanao gazety zokiolona Rabena David.
Isan’ny fotodrafitrasa tsy voakojakoja ny trano fiterahana (maternité) sy ny tranon’ny marary (salle d’hospitalisation) any Tsivory ka nalain’ity dokotera ity sary mba hiheverana ny fomba hikojakojana azy. Izay dia nanakianan’Ingahy “Médecin Inspecteur” azy satria mety hanala baraka azy ho tsy nahavita na inona na inona.
Raha ny akom-baovao dia ianjadian’ny fampihorohoroana hatramin’ny fianakavian’ Ingahy dokotera mpitsabo izao. Toraka izany koa ny fianakavian’ny mpanao gazety sy ny mpampivelona Philippine. Ity farany moa dia efa antomotra ny ho fandehanany misotro ronono nefa dia mbola ianjadian’adin-tsaina mafy indray ankehitriny, ankoatra ny aretim-po mitaiza azy.